Cat Kudya Breading, Maile Ohye uye Tsoko YeTsoko | Martech Zone
Katsi Kudya, Maile Ohye uye Chibhakera cheTsoko
China, August 23, 2012 Svondo, Gunyana 8, 2013 Douglas Karr
Ndichangogamuchira iyi email:
Ndakanzwa Douglas achitaura paBlog Indiana Indiana nezvekuti sei SEO yakafa uye mazwi akakosha haana kukosha sezvavaimboita. Unoita sei kunyatsogonesa vatengi veizvi? Unogona kufarira kutora kwako.
Ongorora: Nepo mazwi akakosha asiri as zvakakosha… zvichiri kukosha kushandisa mazwi akakodzera. Isu tinoshandisa yakawanda nguva nevatengi vedu pakutsvaga kwemazwi makuru Slide yandakagovana nevateereri kuratidza kuti iwe unofanirwa kushandisa iro rakakosha kiyi (uye chiperengo) yaive keke yekudyara maringe nekatsi kuberekesa. Ichi chi kati kurira:
Kuita kuti vatengi vanzwisise kuti kushandiswa kweshoko hakusi sezvakakosha zvakanyanya kuoma. Nepo injini dzekutsvaga dzichigara dzichichinja kune avo algorithms, makambani anononoka kutora. Mukati meiyo SEO indasitiri, tinochengeta ziso rakatarisa uye kuita shanduko nekukasira kuitira kuti vatengi vedu vawedzere kutsvaga uye vagare pamberi pemakwikwi. Kana vatengi vako vasingatende iwe, ini ndaikurudzira akati wandei maitiro.
Kutanga, tora zano kubva Google. Maile Ohye ndeye yekutsvaga chigadzirwa maneja kuGoogle uye anonongedzera zvakajairika zvikanganiso zvinoitwa nevatengesi kana zvasvika pakutsvaga injini yekugadzirisa. Uchacherechedza izvozvo mazwi akadzama havasi muhurukuro! Iko kukanganisa kwavanoita kushomeka kwekukosha chirevo, hapana nzira yakasarudzika, kushandisa macaroundound, kwete kuteerera kune SEO maitiro uye kunonoka iteration.
Zvakanaka… Google yakazvitaura uye iwe wakazvitaura, asi mutengi wako haatombozvitenda. Inotevera kumusoro ndiyo chibhakera chetsoko nzira. A chibhakera chetsoko pfundo rakasungirwa pamucheto wetambo. MuNavy, apo ngarava dzaiuya kuzomira, waikanda chibhakera chetsoko kumahombekombe uko mumwe munhu aizoibata nekukweva tambo. Kumagumo kwetambo iyi yaive tambo hombe yekusungira. Iwe haugone kukanda tambo hombe, saka unotanga netambo diki. Kanda mutengi wako chibhakera chetsoko usati waedza kuvakanda tambo hombe.
Gadzira bvunzo navo kwaunogonesa gumi aripo mablog mablog na uchishandisa mazwi akakosha mushe. Tsvaga gumi mbichana kwaunosarudza asi usingaite mushe mushe wezwi rakapihwa. Simbisa mazwi akakosha, uashandise mumazita, tsvaga mifananidzo kwaunogona kuishandisa mune mamwe mavara tag, ita shuwa kuti iwe une 10 kusvika ku3 inotaura mune zvinyorwa kuti uvandudze iro kiyi kiyi. Chengetedza nguva yaunoshandisa kugadzirisa izvo zvinyorwa, mirira mavhiki e4 uye chiyera mhedzisiro mune yako analytics.
Gadzira bvunzo kwaunonyora gumi nyowani mablog mablog ayo ari kumanikidza. Shandisa mifananidzo mikuru - pamwe mapikicha evatengi kana zvimwe zvidhori mifananidzo yakanaka, nyora mazita anonyengera vanhu kuverenga zvakanyanya, uye nyora nyaya dzevatengi kana zvinyorwa zvemazano zvinonyatso kubatsira vatengi vako. Regedza kushandiswa kwemazwi akakosha… usava nehanya navo zvachose Goverana basa pa Twitter, Facebook, Google+, LinkedIn, StumbleUpon uye chero kupi zvako kwaunogona. Ita dzimwe hurukuro. Chengeta nguva yaunoshandisa, mirira vhiki ina uye uyera mhedzisiro muma analytics ako.
Nekutarisa kune wako mutengi uye nezviri mukati panzvimbo yemashoko akakosha, ndine chokwadi chekuti uchaona kuti sarudzo yechipiri ichapfuura yekutanga sarudzo nguva dzese. Ini handisi kuraira chero munhu kuti arege kugadzirisa, yangu poindi ndeyekuti kana iwe ukamira uchitarisa pamakanika ekutsvagisa injini uye, pachinzvimbo, isa simba rako mune zvakakura zvemukati nekusimudzira izvo zvirimo - iwe unohwina nguva dzese!
Vanokambaira nemabhoti havatenge zvigadzirwa zvako nemasevhisi, vanhu vanodaro. Paunoshandura maitiro ako kuti utaure neanokambaira kana bot, iwe ucharasikirwa nevatengi.
Tags: gurukushandiswa kweshokomaile ohyetsoko chibhakeraSearch Engine Optimizationseo
Kutaurirana uye Kuonekwa
Basa idzva reMukuru weKushambadzira Technology Officer